1 Tantara 17 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 17
Nikasa hanao tempoly Davida fa tsy navelan'ny Tompo - Fivavahan'i Davida.
1Rahefa niorina tao an-tranony Davida dia hoy Davida tamin'i Natàna mpaminany: Izaho ity mitoetra an-trano sedera; nefa ny fiaran'ny faneken'ny Tompo ao anaty lay! 2Ary hoy Natàna namaly an'i Davida: Ataovy izay ao am-ponao, fa momba anao Andriamanitra.
3Ny alin'izay ihany, dia tonga tamin'i Natàna ny tenin'Andriamanitra nanao hoe: 4Mandehana lazao amin'i Davida mpanompoko hoe: Izao no tenin'ny Tompo: Tsy hianao no hanao trano hitoerako. 5Fa tsy mbola nitoetra an-trano aho, hatramin'ny andro nampiakarako an'Israely avy any Ejipta, ka mandraka androany, fa lay sy fonenana no nifindrafindrako. 6Nandritra ny fotoana rehetra niarahako nandeha tamin'Israely rehetra, moa mba nilaza teny indraim-bava aho tamin'ny anankiray amin'ireo mpitsara an'Israely izay nasaiko hamahana ny vahoakako, nanao hoe: Nahoana hianareo no tsy manao trano sedera ho ahy? 7Koa ankehitriny lazao amin'ny mpanompoko, amin'i Davida hoe: Izao no lazain'ny Tompon'ny tafika: Tany an-tanimbilona teo aorian'ny ondry, no nangalako anao mba ho andriana amin'Israely vahoakako; 8nomba anao tamin'izay rehetra nalehanao aho, nandringana ny fahavalonao rehetra teo anoloanao aho, ary nataoko malaza toy ny anaran'ireo lehibe eto ambonin'ny tany ny anaranao. 9Nanokan-toerana ho an'Israely vahoakako aho, dia nampiorina azy eo; ka efa monina eo aminy izy ary tsy hisy hanabataba azy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy toy ny taloha intsony, 10dia toy ny tamin'ny andro nananganako mpitsara tamin'Israely vahoakako. Naetriko avokoa ny fahavalonao rehetra, ary milaza aminao mialoha aho, fa hananganan'ny Tompo trano hianao. 11Rahatrizay tapitra ny andronao, ka ho lasa any amin'ny razanao hianao, dia hasandratro ny taranakao mandimby anao, iray amin'ny terakao, ary hohamafisiko ny fanjakany.
12Izy no hanao trano ho ahy, ary izaho hanamafy ny fanjakany ho mandrakizay. 13Ho toy ny ray ho azy aho, ary ho toy ny zanaka ho ahy izy, ka tsy hesoriko aminy ny famindram-poko, toy ny nanesorako izany tamin'ilay nanjaka talohanao. 14Hampitoeriko mandrakizay ao an-tranoko sy amin'ny fanjakako izy, ary hiorina mandrakizay ny seza fiandrianany.
15Dia niteny tamin'i Davida Natàna araka izany teny rehetra izany sy io fahitana rehetra io. 16Ka tonga Davida mpanjaka ka nitoetra teo anatrehan'ny Tompo, ary nanao hoe: Zinona moa aho, ry Iaveh Andriamanitra ô! ary zinona moa ny fianakaviako no dia nentinao ho tonga amin'izao aho? 17Izany indray aza mbola zavatra kely eo imasonao, ry Andriamanitra. Niteny koa hianao ny amin'ny taranaky ny mpanomponao, hatrany amin'ny andro aoriana any, ary nataonao ho olona ambony laharana aho, ry Iaveh Andriamanitra ô! 18Koa inona indray ho ho azon'i Davida lazaina aminao, ny amin'ny voninahitra nomena ny mpanomponao? Fantatrao ny mpanomponao. 19Iaveh ô, noho ny amin'ny mpanomponao sy araka ny fonao, no nanaovanao izany zava-dehibe rehetra izany, mba hampahafantaranao ireo zava-dehibe ireo. 20Tsy misy mitovy aminao, ry Iaveh, ary tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy hianao, araka izay rehetra ren'ny sofinay. 21Aiza eto ambonin'ny tany izay firenena hafa, manahaka an'Israely vahoakanao, izay nahatongavan'Andriamanitra hanavotany azy, mba ho vahoakany, hahazoanao anarana amin'ny fahagagana aman'asa lehibe, dia ny nandroahanao firenena teo anoloan'ny vahoakanao, izay navotanao tamin'i Ejipta. 22Fa nataonao ho vahoakanao mandrakizay Israely vahoakanao, ka hianao Iaveh no tonga Andriamaniny. 23Ary ankehitriny, ry Iaveh, aoka haharitra mandrakizay ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny amin'ny fianakaviany, ary tanteraho araka ny teninao. 24Aoka haharitra izany, ary aoka hankalazaina mandrakizay ny anaranao; ka aoka holazain'ny olona hoe: Iaveh'ny tafika, Andriamanitr'Israely, dia Andriamanitra ho an'Israely! Ary aoka ho tsara orina eo anatrehanao ny fianakavian'i Davida mpanomponao. 25Fa tenanao, ry Andriamanitra ô, no efa nanambara tamin'ny mpanomponao fa hanorin-trano ho azy, ka izany no nahasahian'ny mpanomponao hivavaka eto anatrehanao. 26Koa ankehitriny, ry Iaveh, hianao no Andriamanitra, ary nilaza izany teny mahafinaritra izany tamin'ny mpanomponao hianao. 27Sitrakao ny hitso-drano ny fianakavian'ny mpanomponao ankehitriny, haharetany mandrakizay eo anatrehanao, fa izay tsofinao rano, ry Iaveh ô, dia ho voatso-drano mandrakizay. >